Tanzania vashanyi vekushambadzira vanoburitsa kapeti tsvuku yevamiriri vekunze vekufamba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Tanzania vashanyi vekushambadzira vanoburitsa kapeti tsvuku yevamiriri vekunze vekufamba
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Vafambi vekushanya vari kuburitsa kapeti tsvuku yevamiriri vekufambisa vekunze nekuda kwekusvika munguva pfupi muTanzania sechirongwa chayo chikuru chekumisazve indasitiri yekushanya yemabhirioni emadhora mudenda reCOPVID-19.
Yakafemerwa nefungu rine hutsinye reCoronavirus, kushanya indasitiri inotsvaga mari muTanzania.
Iyo inogadzira 1.3 mamirioni emabasa akanaka, inogadzira $ 2.6 bhiriyoni pagore, zvakaenzana ne18 pamwe ne30 muzana yeGDP yenyika uye mareti ekunze, zvichiteerana.
Tanzania Association yeVashanyi Vanoshanda (TATO) parizvino iri kushanda kutenderera nguva pachinzvimbo chenhengo dzayo mazana matatu-kuwedzera kuunza vazhinji vevamiriri vekufamba pakupera kwaGunyana 300.
"Tiri kuburitsa mameti ekugashira evazhinji vevashanyi vepasirese, sechimwe chirongwa chitsva chekushambadzira kwatinoenda zvichitevera chirwere che COVID-19," akadaro CEO wesangano, VaSirili Akko.
Vamiririri, kana sevamwe vavo nhasi vanofarira - vanachipangamazano vekufamba kana vagadziri - vanowanzo tengesa nzvimbo dzekushanya uye kurerutsa nzira yekuronga kwekufamba kwevashanyi, pamusoro pekupa masevhisi ekubvunzurudza uye mapakeji ese ekufamba.
"Chirongwa chedu [ndeche] kuunza mazana matatu evamiriri venyika dzekushanya pamwedzi gumi nemiviri inotevera, zvakaenzana nevamiririri makumi maviri nemashanu pamwedzi, kuti vaongorore nekuona kuti Tanzania yakapihwa sei runako rusingaenzaniswi," VaAkko vakadaro.
Pasi peUnited Nations Development Chirongwa (UNDP) rutsigiro, TATO anga achiisa mari zvakanyanya maererano nenguva, hunyanzvi, uye mari yekumisikidza Tanzania senzvimbo yakachengeteka uye yakasarudzika munzvimbo yayo ine mweya wepamusoro wekukwezva vafambi vekumusoro-soro munyika kuburikidza nezano rekushambadzira mumisika yakati wandei.
Allied Market Tsvagiridzo yezvakawanikwa inoratidza kuti yepasirese yemhando yepamusoro yekushanya musika inosvika $ 1.2 trillion munguva ye2021-2027 nekomboni yegore yekukura reshiyo ye11.1 muzana.
Pfungwa yose ndeyekusimudzira kugadziriswa kweindasitiri inorwara yekushanya kuitira kukurudzira mamwe mabhizinesi, kudzorera zviuru zvemabasa akarasika, uye kuunza mari kuhupfumi.
Zano rekuunza vafambi vepasirese munyika kuuya rinoshamisika, sezvo vashanyi vekuyedza kuyedza kusiyanisa nzira yavo yekutengesa kuitira kukwezva vashanyi vakawanda uye kuwedzera huwandu hwekushanya kupona pakurwiswa kwemakwikwi echeka kubva kune dzimwe nzvimbo mudambudziko re- post-COVID-19.
Vanoongorora nezveindasitiri yezvekushanya vanoti izvozvi, muchokwadi, zvinoratidza shanduko yenhoroondo mukushambadzira, sezvo pachinyakare nzira yevashanyi yakamisikidzwa kuenda kunze kwenyika kusimudzira zvinokwezva zvevashanyi munyika zvakanyanya.
Sachigaro weTATO, VaWilbard Chambulo, vakati sangano ravo ranga richiita zvirongwa zvakawanda zvekumutsiridza indasitiri yekushanya iri pamubhedha.
"Tave nepfungwa yekuchinja zano, nekuti zvinoita kuti kushambadza uye hupfumi zviunze kuunza vafambi kuti vaone zvishoma zvinokwezva zvepasirese kupfuura nhengo dzedu kuti dzitevere mhiri kwemakungwa nemifananidzo isingachinji, kunyanya zvakazoitika mudenda reCOVID-19, ”vakadaro VaChambulo.
TATO, pamwe chete neHurumende yehutano, nguva pfupi yadarika yakaburitsa mushonga wakasununguka wekubaya vaccine COVID-19 wakaona zviuru zvevashandi vemberi muindasitiri yekushanya vachigamuchira jabs pamberi pemwaka wevashanyi.
Sangano rakasimudzirawo rutsigiro rwehutano hwezvivakwa mumatunhu akakosha ezvekushanya, zvaisanganisira pakati pezvimwe zvinhu, kuva nemaamburenzi pasi, zvibvumirano nezvimwe zvipatara zvekushandira mabasa evashanyi kana zvikaitika, nekubatanidza chirongwa ichi nemasevhisi vanachiremba vanobhururuka - izvi zvese mukuedza kumutsiridza indasitiri yekushanya.
Munguva pfupi yapfuura, TATO yakwanisa kuburitsa, ichishanda pamwe nehurumende, COVID-19 specimen yekuunganidza nzvimbo kuKogatende neSeronera pakati nepakati kuchamhembe kweSerengeti zvichiteerana.
Neraki, izvi zvekutanga kuita neimwe nzira zvakatanga kubhadhara zvikwereti nekuraira imwe traffic uye kukurudzira kutsva kutsva kwenhengo dzeTATO.
Ndege inotungamira yezororo rekuSwitzerland, Edelweiss, yazivisa kuti ichawedzera Kilimanjaro, Zanzibar, neDar es Salaam senzvimbo dzayo nhatu dzekuTanzania kubva muna Gumiguru, ichipa mwenje wetariro kumakambani ezvekushanya.
Edelweiss, hanzvadzi hanzvadzi yeSwitzerland International Air Lines uye inhengo yeLufthansa Group, inozvirumbidza kune vatengi yeinosvika mamirioni makumi maviri pasirese.
Arif Ahmed anoti:
Nyamavhuvhu 26, 2021 pa12: 10
Mhoroi changamire / madam tinoonga kana muchikwanisa kutibatsira isu hatina isu isu vatengi kubva makore maviri apfuura ini ndine matatu akanaka kwazvo mhuka dzesango kumaodzanyemba kweTanzania 🇹🇿 ndapota 🙏🏼